शशांकले भने:पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कि अरुलाई पालो दिने ? अब देउवाले सोच्नुपर्छ – USNEPALNEWS.COM
शशांकले भने:पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने कि अरुलाई पालो दिने ? अब देउवाले सोच्नुपर्छ
by यूस नेपाल न्युज December 1, 2017
एमाले–माओवादीले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने तयारी गर्दैछन्, तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ ? ऋषि धमलाले प्रश्न थपेपछि कोइरालाले चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस नै हुने दाबी गरे ।
नवलपरासीमा आफ्नो जित सुनिश्चित भएको उनको भनाई छ । चुनाव जितेपछि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ने उनले बताए । यद्यपी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायत धेरै सिनियर नेताहरु भएकाले आफू नै प्रधानमन्त्रीको एक्लो दाबेदार नभएको उनले प्रष्ट पारे ।
राजनीति गरेकै सत्ताको नेतृत्वका लागि भएको अर्थ लगाउँदै कोइरालाले निर्णायक भूमिकामा पुग्ने चाहना सबैमा हुने बताए । पार्टीको प्रक्रियाअनुसार को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने टुङ्गो लगाइने उनले बताएका छन् ।